Tababar kusaabsan cilmu nafsiga oo loo qabtay qaar kamid ah masuuliyiinta dawladda Puntland. – Radio Daljir
Garoowe,Dec,15 -Tababarkan oo ay maal galinaysay Hay\_’ada GRT ayaa waxa loo qabtay qaar kamid ah masuuliyiinta dawladda Puntland,culimaa\_’udiinka,ururada dhalinyarada iyo ururada haweenka,waxaana tababarku ka dhacey hoolka shirarka ee xarunta gobolka Nugaal.
Tababarka oo ahaa mid lagu baranayay cilmu nafsiga ayaa hay\_’adu uga gonlahayd sidii looga soo kaban lahaa dhibaatooyinka dhanka dhimirka iyo sidii loola tacaamuli lahaa dadka qaba cudurada dhimirka.
Faarax Cisman Siciid oo ah madaxa xafiiska GRT ee magaalada Garowe oo ka hadlay furitaankii tababarkan,ayaa sheegay in ay muhiim tahay tababarka ay qaadanyaan xubnaha dowladda iyo ururada kale ee arimaha bulshada,kuwaasi oo waxyaabaha ay baranayaan usii gudbin doona bulshada kale ee aan tababarkan ka qaybgalin.
Gudoomiye kuxigeenka 2-aad ee gobolka Nugaal C/raxman C/casis Ibcad ayaa mar uu ka hadlayay tababarka sheegay inta nasiibka u yeelatay inuu u rajaynayo inay dadka uga faa\_’iideeyaan ayna taasi muhiim tahay.
Hay\_’ada GRT oo siminaarkan soo qaban qaabisay ayaa waxa ay tahay hay\_’ad ku mashquulsan tababarada la xiriira cilmu nafsiga iyo sidii loo saacidi lahaa dad ka qaba xanuunada dhimirka.